OGAALKA SOOMAALI-WEYN.W/Q:C/NAASIR GURAY MEECAAD |
OGAALKA SOOMAALI-WEYN.W/Q:C/NAASIR GURAY MEECAAD
Waxaa bilowdey fara isa-saarkii u dhexeeyay Soomaalidii ku dhaqneyd Majeertiinya iyo xoogaggii is-dhadnaa ee Talyaaniga uu ka soo dejiyay xeebihii gobolka. Colaaddaasi waxay si buuxda u amba-qaaday dabayaaqadii bishii oktoober 1925-kii. Talyaanigu wuxuu markaas itaalkiisii isugu geeyey weeraradii hore oo uu ku duqeynayay degmooyinka xeebaha ku yaal. Waxaa markaas bilowdey dagaalka ay Soomaalida u yaqaaniin magaca ah Daaro-garaac. Talyaanigu wuxuu madaafiicdiisa la beeganayay daarihii ka dhisnaa degmooyinkii waawaynaa ee xeebaha gobolka ku yiil. Maato badan iyo rag kamid ah akhyaartii degaanka ayay galaafteen qaraxyadii uu Talyaanigu la dhacayay aqalladii ay dadku ku dhaqnaayeen. Maxamuud-cadde Cali (Uur-gub) ayaa kamid ahaa akhyaartii ku dhimatey duqeyntii degmada Baar-gaal.
Dhulka gobolku wuxuu leeyahay cimilo adag oo aanan u saamaxayn Talyaaniga in uu ku gaadiido ciidamo tira badan iyo salabkooda. Taas ayaa sabab u ahayd in Talyaanigu uu marka hore weeraro meelaha uu dhib-yarida ku bur-burin karo. Meelahaasi waxay noqdeen degmooyinkii ku yiil xeebaha oo uu ganacsigu ka jiray. Waxaa kaloo uu dareensanaa, dhaawaca soo gaadha degmooyinkaas in sabab u noqonayo in ay curyaanto nolosha ka jirta gudah Majeertiinya. Waxaa xusid mudan in xilligaas ay jireen degmooyin badan ee xeebaha gobolka ku yiil, kuwaas oo Soomaalidu ay ka adeegan jireen. Ganacsiga badan ee halkaas ka soo dega waxaa lagu qaadi jiray awr, kuwaas oo lagu gaadhsiin jiray dhulka gudaha ah ee dalka. Ragga ganacsatada ahaa ee awrta ka raran jiray degmooyinkii xeebaha ahaa, waxaa loo yiqiin yiqiin Kabare.
Degmooyinka iyo tuulooyinka xeebaha ku yiil ee xilligaas hoos imanayay maamulkii Boqor Cismaan, waxay ahaayeen 43. Waxaa magacyadooda inoo soo miin-guurshay Khaalid Cali-Guul. Isagu wuxuu ku sheegey in ay ahaayeen kuwan: Ayl, Guurane, Gabbac, Joog-joogto, Garmaal, Xoor, Dur-dura, Biya-kulule, Macdar, Bender-Beyla, Sheebaab, Cadwa, Wareeg, Jaceel, Foocaar, Hashica, Xaafuun, Hurdiya, Xandha, Ras-Binna, Guba-dhinna, Baar-gaal, Raas-Caseyr, Seymo, Tooxin, Wareegsane, Ollog, Bareeda, Caluula, Booli-moog, Xaabo, Geesaley, Ina Waleembe, Garsa, Murcanyo, Dhurbo, Butiyaalo, Qandala, Buruc, Hantaara, Bacaad, Bender-Qaasim (Boosaaso) iyo Bender Siyaad (Qow). Degmooyinkaas ayaa badankoodu waxay noloshii ka baaba’day duqeymihii ay maraakiibta Talyaaniga u geysteen. Qaar kalena waxay la baaba’een markii maamulkii Majeertiinya uu bur-buray.
“ Dagaalkan magaalooyinka xeebaha ah ka dhacay, wuxuu sababay in magaalooyin badani bur-buraan oo aanan dib loogu noqon. Bur-burka waxaa u weheliyay bur-cad badeeddii Talyaaniga oo ka hor-joogsadey in ay doonyuhu soo galaan ama ka baxaan oo wax la dhoofsado. Taasi waxay curyaamisey degaano qiimi lahaa oo weliba kheyraad badan oo aan meelo kale laga helin, kuwaas oo gobolka laga dhoofin jiray “.(Hirarkii Taariikhda iyo Halgankii Soomaalida. Qaybta Koowaad. Khaalid Cali-Guul Warsame. 2010. S. 280).
Degmooyinkaas iyo tuulooyinkaas inkasta oo ay ahaayeen kuwo ka yar-yar kuwa maanta jira, misana dhamaantood waxaa ka jiray dhaqdhaqaaq nololeed oo ku dhisnaa ka faa’iideysiga badda iyo ganacsiga. Duqeymihii degmooyinkii ugu waawaynaa ee degaanka iyo doonyihii uu Talyaanigu qabsadey, sabab uma ayan noqon in Boqor Cismaan uu is-dhiibo. Bal dhulka gudaha ah ayuu u aag-beddeshay si ciidamadiisu ay dagaalka u sii wadaan. Boqor Cismaan iyo xaashaadiisii, waxay markaas fadhiisteen dooxada lagu magacaabo Dharoor ee ku taal xuddunta gobolka. Ragga uu Boqorku Dharoor ugu tegey waxaa kamid ahaa Caaqil Aw-Muuse Xaaji Maxamuud oo halkaas ku soo dhoweeyey.
Dharoor waa dooxo ballaadhan oo ku fadhida dhul gaadhaya 180 km. Afarta jaho waxaa kaga xeeran buuraha Cal-madow (galbeed iyo waqooyi-galbeed) iyo buuraha Karkaar (koonfur, bari iyo waqooyi-bari.). Hanti badan oo xoolo ah ayaa halkaas ku dhaqnaa. Waxaa jiray saddex qalcadood oo dooxada laga ilaalin jiray. Qalcadda God-dhurwaa waxay ka dhisneyd dhanka bari, waxay dooxada u jirtay 3 km. Qalcadda Isku-shuban waxay ka dhisneyd jahada koonfur-galbeed, waxay doocada u jirtay 12 km. Qalcadda Ceel-dheero waxay ka dhisneyd dhanka waqooyi, waxay dooxada u jirtay 42 km.
Sida aanu soo xusney, ma jirin qorshe uu Talaayanigu ku mardaadiyo, kaas oo uu horey u dejiyay oo la xidhiidha sidii weerar dhulka ah ay ciidamadiisu ugu qaadi lahaayeen ciidamada boqorka. Weerarka dhulkuna maahayn mid uu markiiba qaadi karay oo cimilada dhismo-dhuleedka ah ayaanan u saamaxayn. Sidaa darteed, markii Baargaal la bur-buriyay, xaakimkii Talyaanig De Vecchi wuxuu go’aansadey bartii laga hoggaamin lahaa weeraraka Dharoor in ay noqoto Boosaaso. 2/ 11- 1925-kii ayuu De Vecchi soo gaadhay Boosaaso iyo degmada u dhow ee ah Qow. Labadii degmo waxaa lagu garaacey madaafiic. Nasiib wanaag dad badan ma joogin oo xagaa-bixii dabadeed, colaadda heshay degmooyinkii xeebaha ku yiil darteed ayaanan dib loogu soo laaban. Dabadeed iyada oo aanan dagaal dhicin ayaa ciidamadii Talyaaniga ay la wareegeen labadii Degmo. Waxay maxbuus ahaan u qab-qabteen raggii ka talinayay degaanka oo uu ugu waynaa Axmad Boqor Maxamuud oo ahaa Boqor Cismaan Boqor Maxamuud walaalkiis, kuna magac dheeraa Axmad-Taajir.
Degmada Boosaaso waxay ku taal waddada keliya oo u furan dooxada Dharoor. Haddii laga tallaabo buuraha Cal-madow, meel la yidhaahdo Kala-baydh ayaa looga leexdaa dhul dooxeedyada ay Dharoor kamidka tahay. Sidaa darteed xaakimkii Talyaaniga De Vecchi, waxaa uu guddoonsadey in Boosaaso ay noqoto saldhiggii lagaga duuli lahaa Dharoor. Wuxuu bilaabay abaabul cusub oo degmada Boosaaso uu ku soo daad-gureynayo xooggii ciidamadiisa iyo agabkii ay ku dagaalami lahaayeen. Si sidaas lamid ah ayaa dhankii Soomaaliduna leysaga diyaariyay in leyska caabiyo gumeysiga. Khaalid Cali Guul oo arintaas ka sheekeynaya wuxuu qorey sidan:
“ Dad-waynihii meel kasta oo ay joogeen waxay isu diyaariyeen dagaal beled xeebeed iyo barri miyiba. Boqor Cismaan iyo rag badan oo ciidamo ah waxaa la is-gaadhsiiyay in meel kasta lagula dagaalamo Talyaaniga. Boqorkii wuxuu u wareegey oo saldhig ka dhigtey halka dadku u badan yahay oo ahayd dooxada Dharoor. Masuuliintii magaalooyinkii xeebaha ku yiil waxaa mid kasta uu diyaarsadey ciidamo ka howl-gala, mid-kasta aaggiisa. Islamarkaas xaakimkii Talyaaniga waxaa loo diray waraaq ay saxiixeen odeyaal badan, taas oo loogu sheegayo in ay diyaar u yihiin dagaal haddii uu Talyaanigu diidey nabaddii “. (Hirarkii Taariikhda iyo Halgankii Soomaalida. Qaybta Koowaad. Khaalid Cali-Guul Warsame. 2010. s. 275).
Xilligaas Talyaanigu wuxuu ku guda jiray sidii uu Boosaaso weerar uga soo qaadi lahaa. Saddexdii degmo ee ugu waynaa ee uu gacanta ku dhigey, mid waliba wuxuu ku soo reebey ciidan koox ah iyo maraakiib wax duqeeya. Ujeeddadu waxay ahayd haddii la jebiyo ciidankaas dhulka ku sugan, in uu badda ka soo duqeeyo. Degmooyinka saddexda ah waxay ahaayeen Xaafuun, Baar-gaal iyo Caluula. Sidaas ayaa gobolkii Majeertiinya waxaa uga bilowdey xanaftii dagaalka ay labada ciidan ku hardamayeen. Ciidan u dhashay Soomaali oo hadafkoodu ku xidhiidhsan yahay hadafka ay u dirirayeen jabhadihii ugu horeeyey ee Talyaaniga kula diriray Kismaayo iyo Marka. Iyo kuwii xigay oo ay ugu waynaayeen halgamadii ay hoggaaminayeen Shiikh Xasan Barsane iyo Cumar Samantar. Halgamadaas iyo kuwo badan oo gumeysigu dhiciseeyey ayaa guusha waxaa ka hor-taagnaa aragtida ummadeed ee maqan. Xooggii iyo awooddii is-buuxin lahayd markii ay iyadu noqoto mid is-xoqda, xeer nololeed weeye in xoog shisheeye oo ummad ahaan isu ururshey in ay ka dhex faa’iideystaan oo boob ugu yimaadaan.
Dagaaladii badnaa ee markaas gobolka ka ololey kuwoodii ugu horeeyey waxaa kamid ah dagaal ay qaadeen dhallinyaro ciidan ahayd oo fadhidey degaanka Tooxin. Degmadan ayaa waxay 18 km. koonfur ka xigtaa degmada Raas-Caseyr ee ku taal xagasha waqooyi-bari ee gobolka. Waa fiiqa geeska ah oo xeebteedu dhanka bari ay ka tahay Bad-waynta Hindiya, dhanka waqooyina ay ka tahay Badda Cas. Dhallinyaradaasi oo tiradoodu lagu qiyaasey 300 ayaa waxay isku urursadeen meel la yidhaahdo Heliso. Waxaa odey u ahaa nin la yidhaahdo Ismaaciil Cismaan.
24/ 11- 1925-kii, qeyb kamid ah ciidankaas ayaa waxay weerar ku qaadeen xarun uu Talyaaniga ku lahaa degmada Raas-Caseyr (Gardafooy). Talyaaniga waxaa degmada uu ka dhisey munaaraddii ugu hilanka cusleyd munaaradihii uu ka dhisey xeebaha Soomaaliya eek u wajahan Bad-waynta Hindiya. Degmooyinka Kismaayo, Baraawe, Xamar, Hobyo, Xaafuun ayuu dhamaan dekadahooda wuxuu ka taagay dhismo munaarad oo feynuus wayn ay dusha kaga jirto. Maraakiibta ayaa habeenkii bidhaansada si ay degmada u soo haleelaan. Munaaradda Raas-caseyr waxay kaga duwaneyd kuwan, iyadu waxay ishaaro u ahayd maraakiibta badan ee isga-gooshaya biyaha labada (Bad-waynta Hindiya iyo Badda Cas).
Ninka ka danbeeyey dhismaha munaaradda Raas-caseyr waxaa la odhan jiray Faro Francesco Crispi, kaas oo ra’iisul-wasaare ka noqdey dalka Talyaaniga muddadii u dhexeysey 1893 – 1896. Waxaa kaloo ninkaas loo yiqiin Crispi III. Markaas ay dagaalyahannadu weerarayaan munaaradda Raas-caseyr, da’deedu sanad ayuu ahaa. Waxaa halkaas ku sugnaa unug ciidan ah oo Talyaani u badan. Dhallinyaradii weerarka qaadday waxay xaruntii ku dileen 6kamid ah askartii ilaalada ahayd oo afar kamid ah ay Talyaani ahaayeen, iyo labo shaqaalihii munaaradda ahaa. Waxaa kaloo goobtaas lagu diley Aldo Jhona oo ahaa farsama-yaqaankii munaaradda. Dabadeed munaaraddii ayaa halkii lagu bur-buriyey.
Markey arintaasi dhacdey, waxaa soo gurmadey ciidan koox ah oo Talyaaniga u fadhiyay degmada Tooxin. Waxaa hoggaaminayay sarkaal la yidhaahdo Cap. Gatti. Ciidamadii boqorka waxay markiiba galeen jidgooyo. Weerarkii qabsadey ciidankii Talyaaniga, waxaa uga dhintey 20 askari oo uu kamid yahay hoggaamiyahoodii Cap. Gatti. Qoryihii ay wateen ayaa dhamaan waxay gacanta u galeen dagaalyahannadii Soomaalida ahayd. Qoryaha ay halkaas ka heleen waxaa kamid ahaa qori kuwa darandooriga u dhaca oo Soomaalidu u tiqiin Bambam. Dhaawaca gaadhay dagaalyahannadii Soomaaliyeed wuxuu ahaa, siddeed nin oo ka dhimatay iyo saddex ka dhaawacantay. (Hirarkii Taariikhda iyo Halgankii Soomaalida. Qaybta Koowaad. Khaalid Cali-Guul Warsame. 2010. s. 275).
Degmada Hurdiya ee dhanka waqooyi ka saran Xaafuun, ayaa waxaa ka dhisneyd wershad wayn oo cusbada laga dhoofiyo. Wershadaha ay leeyihiin waddamada Ruushka, Jabaan iyo Jarmalka ayaa cusbadaa qaadan jiray. Cusbadu markii kiimiko ahaan loo kala dhilqiyo waxay noqotaa laba cunsur oo ahmiyad u leh sameynta agab badan oo dadku adeegsado. Labadaas cusnsur ayaa waxay yihiin sodium-chloride. Sidaa darteed Talyaanigu kharaj badan ayaa ka soo geli jiray cusbada wershaddan.
Inkasta oo shaqaaluhu ay u badnaayeen Soomaali, misana Talyaaniga waxaa u joogey labaatan nin oo farsamo-yaqaano ahaa. Iyagu markii ay maqleen shiddadii ka dhacdey Raas-Caseyr, waxaa ku dhalatay cabsi. Taarkii ay dirsan lahaayeen oo ay kula xidhiidhi lahaayeen ciidamadoodii waa laga gooyay. Sidaa darteed waxay u kaceen dhanka buuraha si aanan degmada loogu iman oo aanan loo leyn. Markay arkeen in ay biya la’aan u dhimanayaan, waxay ku soo laabteen degmadii oo ciidamadii Soomaaliyeed ayan weli soo gelin. Waxaa xusid mudan, ciidan 500 gaadhaya in xilligaas ay fadhiyeen meel u dhow degmada Xaafuun. Waxaa odey u ahaa nin la yidhaahdo Xaaji Yuusuf. Waxaa cududeynayay oo gadaalkooda fadhiyay 500 oo kale oo uu hoggaaminayay wiil ina Boqor Cismaan ah. Kaasi wuxuu ahaa Xirsi Boqor. Farsama-yaqaannadii Talyaaniga ahaa meelina waa qaadan weydey. Waxay ku carareen huudhiyo oo waxay u qaxeen oo tageen Raas Xaafuun. Saddex maalmood ayay biya la’aan iyo cunno la’aan ahaayeen.
2/ 12- 1925-kii, xeebta degmada Hurdiya waxaa soo gaadhay ciidamo Talyaani ah oo gurmad u socda. Degmadii oo cidla ah ayay ku soo degeen. Iyaga oo magaaladii dhex jooga ayaa weerar qabsadey. Waxaa soo hujuumey qeybo kamid ah ciidamadii Xirsi Boqor. Waxaa halkii lagaga dilay 35 nin. Hubkoodiina waa laga qaatay.
“ Gumaadkii Xaafuun ka dhacay waxaa soo ruqaansaday cuntub kamid ah maraakiibta dagaalka ee Talyaaniga ka joogey bad-waynta Hindiya (Divisione Navale Oceano Indiano). Qeybtani waxay ka koobneyd:
1) Markab wayn oo dadka qaada oo la yidhaahdo Firenza. Ciidamada badda ee saran waxaa kamid ahaa guutadii II-aad ee Ereteriya, kuwaas oo loogu tala-galay in ay xoojiyaan ciidanka lugta.
2) Markab dagaal oo la yidhaahdo Campania. Waxaa loogu tala galay in uu hubka culus ku garaaco Xaafuun iyo Hurdiya, si uu uga saaro dagaal-yahannada.
3) Markab dagaal oo la yidhaahdo Savona, kaas oo isaguna kamid ahaa qeybtan
4) Markab dagaal oo la yidhaahdo San Giorgio, kaas oo ka soo gurmadey xeebta Caluula. Waxaa saarnaa hal koox oo ciidan ah “. (Hirarkii Taariikhda iyo Halgankii Soomaalida. Qaybta Koowaad. Khaalid Cali-Guul Warsame. 2010. s. 283 – 284).
5/ 12- 1925-kii ayay raxantaas maraakiibta ah ay soo gaareen degaanka. Waxaa watay oo odey ka ahaa nin Admiraal ah. Waxay markiiba duqeyn ku bilaabeen labadii degmo ee ahaa Xaafuun iyo Hurdiya.
“ Waxaa halkaas lagu gubey labadii magaalo iyo wershaddii milixda. Waxaa isla-daryaamey buurihii ku teedsanaa magaalooyinka. Dagaalyahannadii waxay qabsadeen ceelashii biyaha macaa. Askartii Talyaaniga waxaa dhibaato ku noqotey sidii ay u heli lahaayeen biyo ay cabaan. Ceel ay ka cabi karaan waxaa markaas ugu sokeysa Xandha oo 12 km. u jirtay “. (Hirarkii Taariikhda iyo Halgankii Soomaalida. Qaybta Koowaad. Khaalid Cali-Guul Warsame. 2010. s. 284).
Si uu u durkiyo dagaalyahannada, wuxuu dhulka ku soo dejiyay abadii guuto oo uu ciidan ahaan u watay. Iyagu waxay ahaayeen guutada II-aad ee Banaadir iyo guutada II-aad ee Ereteriya. Dul Xaafuun oo magaalada ka baxsan ayay fadhiisteen. Halkaas ayaa waxaa ku bilowdey dagaallo jabhadeyn iyo goos-goos ah oo aanan ka joogsan ciidamadii Talyaaniga ahaa meesha soo fadhiistey.
Majeerteenka hoosiyo Cismaan waa mitidiyaane
Boqorkii la maamuusayaa maasaha u sida’e
Mid adeyga waxa looga hadhay mudane weeyaane
Manaamada Darwiishkii haduu diinta marinaayay
Muslinnimada gaadhiyo ninkii muuminnimo sheegtay
Ogaadeenka Mowliyo Kilwa Geri la meeleeye
Ley-marag magaalada Jig-jiga oo Amxaar marine
Maraakiib sidii loogu guray muuqan mahayaane
Goortaan magaalada deyaa maanku ololaaye
Isaaqii magaalada Berbera Maakhirkiyo xeebta
Nimankii macaash iyo dallaal badaha miisaamey
Dadku maqal madluun iyo iney magan ku joogaane
Sidii loo mashiiqsadey ayey murugtey laabtiiye (Faarax Cismaan Kowto)
XIGASHO:AQOONYAHAN DR SAADIQ EENOW.